Archives des Andavamamba - Midi Madagasikara
Andavamamba : Pasitera voatafika, lasa ny vola sy entana maro
Redaction Midi Madagasikara 11 avril 2014 Andavamamba, basy, Jiolahy, Pasitera
Ny alin’ny talata hifoha alarobia, notafihan’ny sasany ny tranona pasitera iray teny amin’ny faritra Andavamamba. Ny vaovoa no nahalalana fa telo ny isan’ireo mpanafika. Tsy nahare velively ny nidiran’ireo olon-dratsy ilay mpitandrina sy ny vadiny. Izy ireo irery no tao an-trano tamin’io alina io. Efa tafiditra ireo jiolahy vao samy taitra. Ny loharaom-baovao hatrany no…
Fanafihana ny Accès Banque sy ny perception Analamahitsy : Jiolahy 11 tratra niaraka tamina basy 3 sy bala
Redaction Midi Madagasikara 8 avril 2014 Accès banque, Ambodifilao, Andavamamba, Ankadilàlana, basy, Gal Ramananarivo, gazety, Grenady, Hôtel Pacifique, Jiolahy, kalachnikov, Makarov, Mandroseza, perception Analamahitsy
Ravan’ny mpitandro filaminana ny andian-jiolahy nampihorohoro teto an-drenivohitra nanomboka tamin’ny fiandohan’ny taona Nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety teny Ankadilalana ny mpitandro filaminana miandraikitra ny famotorana momba ireo fanafihan-jiolahy niseho teto an-drenivohitra herinandro maromaro lasa izay. Nahazo vaovao izy ireo fa misy olona mipetraka eny Antanandrano mampiahiahy. Nandeha teny an-toerana ny mpitandro filaminana nanao ny…
Andavamamba : « Gargote » voatafika, lasa hatramin’ny peratry ny mpivarotra
Redaction Midi Madagasikara 6 mars 2014 Andavamamba, Gargote voatafika
Telo ka hatramin’ny dimy lahy no isan’ny mpanafika. Mitam-basy izy ireo nefa dia hala-botry no notontosaina. Novakiana ilay trano fivarotana hani-masaka, izay sady fipetrahan’ny mpivarotra sy ny ankohonany ihany koa. Omaly manodidina ny tamin’ny telo ora sy sasany maraina no nisian’ity vaky trano nampiasaina fitaovam-piadiana ity, tetsy Andavamamba. Lasa ny vola maty indray andro, ny…
Accès banque : Karohina i Voay sy Zorgie
Redaction Midi Madagasikara 14 février 2014 Accès banque, Andavamamba, Angelson, Anosy, Brigade Criminelle, Jiolahy, Kidnapping, Mahajanga, Nosy, polisy, Tatasoatia, Toamasina
Tsy niandry ela dia efa fantatra ny momba ny roa tamin’ireo nanafika. Voay sy Zorgie no fiantso azy ireo raha araka ny fanazavan’ny BC. Mihazakazaka ny fandehan’ny raharaha etsy amin’ny Brigade Criminelle (BC) etsy Anosy. Samy mampiasa ny loharanom-baovao sy ny olom-pantatra avokoa ny pôlisy mpanao fanadihadiana taorian’ny fanafihana ny Accès Banque tetsy Andavamamba afak’omaly.…
Football – Coupe de la CAF : St Michel Elgeco Plus y croit !
Redaction Midi Madagasikara 14 février 2014 Alfred Randriamanampisoa, Andavamamba, CAF, Football, Mahamasina, Raux Auguste, Seychellois, St Michel Elgeco Plus
L’optimisme est de mise pour St Michel Elgeco Plus qui se prépare à accueillir pour samedi à 14h30, à Mahamasina, les Seychellois de St Michel United. « Tous les joueurs sont prêts physiquement et moralement et il n’y a pas de raison à ce qu’on remonte cette courte défaite de 1 à 2 du match aller »,…